संगठन विधीले चल्छकी पाखुराले कमरेड ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
संगठन विधीले चल्छकी पाखुराले कमरेड ?
युवा संघ विवाद
- दिलु पन्त
कहीँ नभएको जात्रा जस्तो अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि स्थायी कमिटीकै बैठकले उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष तोक्छ, संगठनको साधारण सदस्य नभएका साथी एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीको सचिव हुन्छन् र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कमरेडले सगर्व भन्छन्, कत्रा–कत्रा नेतालाई थाङ्नामा सुताइसके, मलाई केही कुराको फिक्रि छैन ।
अनेकन प्रकारका स्वेच्छाचारिता स्वीकार्दै राजनीतिलाई ‘पसल’ झैँ चलाउने कि सांगठनिक पद्दती, मर्यादा, नीति–विचारहरुको रक्षा र पालना गर्दै एउटा आदर्शवान कम्युनिष्ट संगठन चल्न सक्दैन । यसरी चलाउने वा नयाँ बाटो खोज्ने ? अहिले युवा संघ नेपाल यही विषयको छिनोफानो लगाउनुपर्ने चरणमा छ । अहिलेको नेतृत्वले प्रदर्शन गर्दै रहेको स्वेच्छाचारिता हेर्दा लाग्छ, हामी राजनीतिक संगठन चलाइरहेका छैनौँ । माछा बजारमा व्यापारीले जति धेरै ठ्वाँस्स गन्हाउने माछा बेच्छ, उसले आफूलाई त्यति नै सफल ठानेझैँ हाम्रो संगठनमा जति धेरै स्वेच्छाचारी खेलमा सफल भयो, मूल नेतृत्वले आफूलाई त्यति नै सफल ठान्ने गरेको छ । यस्तै गतिविधिबाट आज माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तकै धज्जी उडाइएको छ ।
कहाँ छ त्यो विधान ? न अध्यक्षलाई चाहिएको छ, न कोही पदाधिकारीलाई । गुट चलाउने र संगठन चलाउने फरक कुरा हो । संगठन गुटहरुको महासंघ बनाउने र गुटहरुबाट अनुमोदित भएका विषय मात्र संगठनका विषय बनाउने रोग युवा संघमा भित्रएको छ । जसले अराजकता र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध बोल्छ, त्यसका विरुद्ध नियोजित रुपमा व्यक्तिगत लाञ्छना थोपर्नेसम्मको काम हुन थालेको छ ।
यो मुलुकमा कार्यकर्ताको बलले बाँचेको कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा (एमाले) मात्र हो । त्यस्ता कार्यकर्ता कि जसले माथिल्लो नेतृत्वका अनेकन गलत क्रियाकलापलाई कहिल्यै अनुमोदन गरेनन् । नजिकैबाट हेर्दा नवौँ महाधिवेशनमै जाऔँ, जहाँ नेतृत्वले गुटबन्दी ग¥यो, तर कार्यकर्ता (प्रतिनिधी) ले त्यसलाई अनुमोदन गरेनन् । फलतः पार्टी टुक्रिनबाट जोगियो । त्यही पार्टीको भातृ संगठनको कुरा हो, जहाँ संगठन पद्दतीलाई धोती लगाइएको छ । मनोमानी र स्वेच्छाचारिता चरम चुलीमा पुगेको छ । कहीँ नभएको जात्रा जस्तो अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि स्थायी कमिटीकै बैठकले उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष तोक्छ, संगठनको साधारण सदस्य नभएका साथी एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीको सचिव हुन्छन् र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कमरेडले सगर्व भन्छन्, कत्रा–कत्रा नेतालाई थाङ्नामा सुताइसके, मलाई केही कुराको फिक्रि छैन । संगठनको विधान पनि छ ।
साथीहरुका आर्थिक, चारित्रिक र नैतिक लाञ्छनाका कुरा उठाएर संगठनको आन्तरिक प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्ने हो भने हामीसँग पनि थुप्रै साथीका चारित्रिक मामिला सुरक्षित छन् । तिनका आर्थिक र नैतिक विषय छन्, जो अत्यन्तै निकृष्ट छन् ।
तर, कहाँ छ त्यो विधान ? न अध्यक्षलाई चाहिएको छ, न कोही पदाधिकारीलाई । गुट चलाउने र संगठन चलाउने फरक कुरा हो । संगठन गुटहरुको महासंघ बनाउने र गुटहरुबाट अनुमोदित भएका विषय मात्र संगठनका विषय बनाउने रोग युवा संघमा भित्रएको छ । जसले अराजकता र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध बोल्छ, त्यसका विरुद्ध नियोजित रुपमा व्यक्तिगत लाञ्छना थोपर्नेसम्मको काम हुन थालेको छ । साथीहरुका आर्थिक, चारित्रिक र नैतिक लाञ्छनाका कुरा उठाएर संगठनको आन्तरिक प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्ने हो भने हामीसँग पनि थुप्रै साथीका चारित्रिक मामिला सुरक्षित छन् । तिनका आर्थिक र नैतिक विषय छन्, जो अत्यन्तै निकृष्ट छन् । तर, हामी संगठनलाई बचाउने अभियानमा लागिरहँदा त्यस्ता फजुल कुरामा ध्यान दिइरहेका छैनौँ ।
तर्कहरु सकिएपछि व्यक्तिमाथि टिकाटिप्पणी गर्दै विषयान्तर गर्ने जुन खेल चल्दैछ, त्यो गैरमाक्र्सवादी छ, गैरजिम्मेवार छ र चरम अराजकता प्रतित हुने विषय छ । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा हो, गुटबन्दी नगरौँ, तटस्थ बसौँ भन्ने इमान्दार युवाका लागि एमालेमा ठाउँ छैन । तर, कसैका बाबु–बाजेले गरिखाऊ भनेर बनाइदिएको संगठन नभएका कारणले, माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुलीय जनवादी सिद्धान्तलाई बोक्ने एउटा प्राधिकारप्राप्त संगठन हुनुका नाताले र एउटा उच्चतम राजनीतिक तथा संगठानिक चरित्रको गौरवशाली संगठन हुनुका नाताले त्यो संगठनमा हावी भएको अराजकता विरुद्ध लड्नु हरेक इमान्दार एमाले युवाका लागि अनिवार्य दायित्व बनेको छ ।
नेतृत्वका कतिपय साथीमा युथफोर्सकालीन धङ्धङी बाँकी नै रह्यो । आधारभूत वर्गकै जनताको घरमा जन्मिएका र हुर्किएका युवा कमरेडहरु रातारात नवसामन्त बने । कमरेडहरुले निर्देशन हैन, उर्दी हाँक्न थाले ।
हिजो माओवादी अराजकता र अतिवादका विरुद्ध जवाफी भूमिका हामीले खेल्नैपथ्र्यो । त्यो भूमिका युवा संघले निभायो, युथफोर्सका नाममा । त्यसको उपादेयता आंशिक रुपमा समाप्त भएपछि फेरि संगठन पूर्णतः राजनीतिक चरित्रबाटै अगाडि बढ्ने कार्यदिशाका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ । तर, नेतृत्वका कतिपय साथीमा युथफोर्सकालीन धङ्धङी बाँकी नै रह्यो । आधारभूत वर्गकै जनताको घरमा जन्मिएका र हुर्किएका युवा कमरेडहरु रातारात नवसामन्त बने । कमरेडहरुले निर्देशन हैन, उर्दी हाँक्न थाले । विधानलाई नेप्किन पेपर बनाएर स्वेच्छाचारीताको भोजन गरे । विधि–विधान जुवाडेका गफजत्तिको पनि भएन । जे मन लाग्यो, त्यही–त्यही गर्ने र पार्टीको उपल्लो नेतृत्वसगँ निकट भएका नाममा सब कुरा अनुमोदन गराउँदै संगठनमा हिटलरी शासन चलाइयो ।
यो आन्दोलनमा आश्रित, मनमोहन, तुलसीलाल, साहाना जस्ता आदर्श पात्रको लगानी र योगदान छ । तर, आज युवा संघमा जुन मनोमानी, अराजकता र उत्श्रृंखलपूर्ण गतिविधि भइरहेका छन्, ती गतिविधिले इतिहासका ती सब तथ्यलाई मिथ्या सावित गर्ने प्रयत्न हुँदैछ ।
त्यसका लागि केही नेताका घरघरमा पुगेर तिनका परिवार रिझाउनेसम्मको काम गरियो । समाजमा बिग्रिएका र गन्हाएका कतिपय व्यक्तिलाई सुधार्ने नाममा संगठन प्रवेश गराइयो । ती व्यक्ति सुध्रिएनन्, बरु संगठनको बचेखुचेको साख गिराएका छन्, ती व्यक्तिले । एउटा राजनीतिक पार्टीको युवा संगठन विचारले प्रशिक्षित हुनुपर्नेमा मनी र मसल्सका भरमा व्यक्तिको मूल्यांकन हुने परिपाटी शुरु भयो । नेकपा (एमाले) पुष्पलालले वीजारोपण गरेको घोषणापत्रमा आधारित एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी संगठन हो, त्यो विचारलाई क।मदनले नयाँ युगमा नयाँ व्याख्या र विवेचनासहित अर्को सिद्धान्तका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्दै माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका साथ यो आन्दोलन अगाडि बढेको छ ।
यो आन्दोलनमा आश्रित, मनमोहन, तुलसीलाल, साहाना जस्ता आदर्श पात्रको लगानी र योगदान छ । तर, आज युवा संघमा जुन मनोमानी, अराजकता र उत्श्रृंखलपूर्ण गतिविधि भइरहेका छन्, ती गतिविधिले इतिहासका ती सब तथ्यलाई मिथ्या सावित गर्ने प्रयत्न हुँदैछ । एमाले हुनलाई ‘अभिवादन’ र ‘लालसलाम’ भनिदिएर पुग्दैन । फलानो कमरेड र चिलानो कमरेड भन्दै नेताको घर–घरमा धाएर पनि पुग्दैन । यहाँ त विचारले सम्पन्न हुनुपर्छ । विचार र व्यवहार दुबैमा त्यो व्यक्ति माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जबजवादी हुनैपर्छ । यो एउटा सामान्य मान्छे एमाले बन्नका लागि चाहिने पहिलो योग्यता र आवश्यक शर्त हो ।
तर, यी आवश्यकता र शर्तको धोती लगाइएको संगठन कुनै छ भने, त्यो युवा संघलाई बनाइँदैछ । अरुबाट हैन, यी सबै कुरा बुझेका निवर्तमान अध्यक्ष आफै त्यस्ता काममा सक्रिय छन् । हामी देशभरका युवा एमाले साथीलाई अपिल गर्छौं कि, हाम्रो त्यो गौरवशाली झन्डा कसैको जुठो पुछ्ने, कसैको दुराकांक्षा पूरा गर्ने र कसैको मनोमानी चलाउने टालो नबनोस् । संगठनको साख जोगाउन साथीहरु शीरमा कफन बाँधेर संघर्षमा उत्रौँ ।
पन्त युवा संघ नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन ।
सरकारी गाडिमाथी गरिएको आगजनी गल्ती थियो, माफ पाउँ !
युवा संघ नेपाल नेपाली युवाहरुको ढुकढुकी हो । आशा र...